Aabbahiis waa geeriyoodey laakiin waa la diidey in la diiwaageliyo geeridiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilyas Hassan aabbahiis waxuu ku geeriyoodey Soomaaliya laakiin heyaddahadalkan ayaa diidey in ay aqbalaan waraaqaha geeridiisa xaqiijineysa. Foto: Ilyas Hassan.
Aabbahiis waa geeriyoodey laakiin waa la diidey in la diiwaageliyo geeridiisa
La daabacay torsdag 27 februari 2014 kl 14.54
Ruuxa u socdaala waddan sida Soomaliya oo kale ah kuna geeriyooda waxa uu dalkan Iswiidhen uga diiwaan-gashanaanayaa sida ruux nool. Waayo waraaqaha geerida ruuxaas iyo dokumentiyada laga soo sameeyo Soomaaliya ayaan laga aqoonsaneyn dalkan Iswiidhen.
Waxeyd aheyd 21 August sannadkii tagey markii koox dabley ah ay ku dileen magaalada Mogadishu Cbdirahim Xassan oo ahaa muwaadin Iswiidhish ah kana tirsanaan xisbiga Vänsterpartiet. Inkastoo geerida Cabdirahim warabaahinta caalamka ka hadashey, wasaarada arrimaha dibaddana ee Iswiidhen bogeena internetka ku xaqiijisey geeridiisa haddana wax ka badan afar bilow ayey ku qaadatey qoyska Cabdirahim ay diiwaan geliyaan geeridiisa heyadda diiwaangelinta dalkan Skatteverket. Laakiin sagaalkii januari waxaa sidoo kale isla magaalada Mogadishu ku geeriyoodey aabbahii dhaley Cabdirahim. Balse diiwaangelinta geeridiisa ayaa reerkiisa laga siiyey diidmo. Waxaan diidmadaas loo cuiskadey in aysan Soomaaliya ka jirin maamul la’aamini karo dokumentiyadiisa. Ilyas Xassan waa 21 sanno jir la dhashey Cabdirahim.
- Wallaalkey Cabdirahim markuu dhintey, waraaqo dhaqaatiirta iyo booliiska Soomaaliya qoreen baan u geyney Skatteverket oo muujinaya Cabdiharim in uu geeriyoodey. Skatteverket weudiideen in ay waraaqahaas aqbalaan waxeyna yiraahdeen in Soomaaliya tahay waddan maamul fiican ka jirin oo aan la aamini karin waraaqaha laga soo qorey. Sidaas daraadeed wey diideen in ay aqbalaan waraaqaha weyna diideen in ay Cabdirahim u diiwaan geliyaan in uu geeriyoodey, ayuu yeri.
Diidma la diidey in la diiwaan geliya geerida Cabdirahin waxey saameyn ku yeelatey elheladii Cabdirahim iyo ilmahii uu ifka uga tagey.
- Cabdirahim gabar yar oo inta ku dhalaa jirta, gabadha yar xag waxey ugu leedahey dowladda in ay ka hesho wax la yiraahdo efterlivnadsbidrag (guno la siiyo dadka laga dhintey) madaama aabbaheyd geeriyoodey. Waagii Cbadirahim noolaa gabadha waxaa la siin jirey underhållbidrag; oo la siiyo marka ay waalidiinta kalo tagaan ilamaha. Kalmadas ayaa gabadha la siin jirey laakiin laanta caymiska (Försäkringskassan) warqad bay u soo direen gabadha hooyaded markey maqleen in aan anniga Skatteverket la xiriirey. Waxaana ku qornaa in ay gabadha dhaqaalaha ka joojinayaan. Gabadha hooyaded waxey weydiisey haddii ka jaraneysiin gabadha dhaqaalaha mad alban kartaa gunada la siiyo ruuxa laga geeriyoodey? Waxeyan ku jawaabeen mad alban kartiin illaa la diiwangeliyo in Cabdirahim geeriyoodey.
Geerida Abdirahim oo xataa waraasadda arrimaha dibadda si rasmi ah u xaqiijisey, sidoo kalena ay ka marqaati kacdey geeridiisa haweyney Iswiidhish ah oo la soctey markii la dilayey Cabdirahim ayadauna ku dhaawacan tahay waxey ku qaadatey qoyska Cabdirahim in ay ku guuleystaan diiwaan gelinta geeridiisa wax ka badan afar bilood.
Balse qoyskan ayaa markale la soo gudboonaatey geeri kale kadib markii sagaalkii bishii Januari ku geeriyoodey aabbahood magaalada Mogadishu oo halkaas u joogey la socodka baaritaanka ciddii ka danbeysey dilkii wilkiisa Cabdirahim. Geeridas oo ka micno ah in qoyska marlabaad dib ula tacaalan hab sharciyeedka qallefsan ee heyaddaha Iswiidhen.
Ilyas Hassan ayaa warqad cabasho ah u qorey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda inkastoo uusan wasiir iyo aysan warqad weli wax jawaab ah ka soo baxin
Radiyaha Iswiiidhen laanta afsoomaliga ayaa ogaatey in ay jiraan saddex qoys oo kale oo Soomaali ah oo ay arrintaan Heysato, sida uu nooqsheegey Xussein Warsame oo imaan ka ah Masaajid ku yaala Stockholm. Waxuuna sidoo kale ii shegeey in masjidyada iyo ururada Soomaalida hgo’aansadeed in ay arrintaan ka dhiidhiyaan.
Laanta Raadiyaha Iswiidhen ayaa isku deydey in ay la xriirto wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalkan Iswiidhen iyo wasiirka qaabilsan Carl Bildt. Balse sarkaalad hoose oo u qaabilsan arrimaha saxaafada ayaa igu wargelisey in arrintaan aysan quseynin wasaaradda arrimaha dibadda balse arrintaan hoostago wakaalada Skatteverket iyo hanaankeeda diiwaan gelinta. Sidoo kale nooma suuro gelin in aan wax jawaab cad ah ka helno Skatteverket madaama afhayeenka arrimahan u qaabilsan uu fasax ku maqnaa. Balse mar ay horey wareysi u siisey wargeyska DN ayey u sheegtey in uusan jirin xeer u yaala skatteverket oo oranaya in aan la aqbali karin waraaqa iyo dokumentiyada laga soo saaro Soomaalia balse dokumentiyada noocan ah haddii dalka ka talisa aysan xaqiijin karin dhabnimadooda uu markaas dokumentiga noocaan ah la heyn qiimo sidaas u buuran.
Caadiyan dadka Iswiidhen dhib sidaas u buuran kalama kulmnaan waraaqaha cadeynaya in uu ruux geeriyoodey laakiin waraqaaha laga soo sameeyo Soomaaliya ayaa ka reeban sida ay tiri Ulrika Lundström oo ka howl-gasha skatteverket.
– Waxaa jira waddo faro kut iris ah oo waraqahooda dhibaato ka taagan tahay, sida Soomaaliya oo kale oo heyaddaha dowladda xaqiijin karin in ay sax yahiin iyo in kale. Waana wax laga xumaado kuwo ay saan ku dhacdo ayey tiri.